Waxa la sheegay in faafitaanka cudurka hiv aidhska ee magaalooyinka u todoba jibaaray ka miyiga – ዜና ከምንጩ
Waxa la sheegay in faafitaanka cudurka hiv aidhska ee magaalooyinka u todoba jibaaray ka miyiga
Sanadkan 2013ka oo kaliya ayaa waxa laga helay cudurka hiv aidhska in kabadan 11kun oo qof.
Waxa la soo ogaaday in faafitaanka cudurka ee hiv aidska ee dalka u sii badanaayo gaar ahaana magalooyinka.marka la isbarbar dhigo heerka u faafitaanka cudurku u ka maraayo magaalooyinka iyo miyiyada ayaa waxa la sheegay in u mgaalooyinka aad ugu badanyahay faafitaanka cudurku.
Waxa xusid mudan in ay wasiirada wasaarada cafimaadka dalka ee marwo Liya Tadese ay ku sheegtay xuskii 33aad ee malinta aidhska ee dalkeena in faafitaanka cudrku u si xawli ah ugu faafayo dalkeen. warwar dhinaca cafimaadka ah ayaa sheegaya in magaalooyinka sida addis ababa,gaambela iyo magaalooyinka ay ka muuqato ilbaxnimadu ama reer magaalnimadu u faafitaanka cudurku aad ugu badanyahay.
Waxa kale oo la sheegay in dadka u nugul cudurka hiv aidsku ay ka mid yihiin kuwa ku hawlan adeega gaadiidka ee u kala baxax meelaha fog fog, dumarka jidhkooda ka ganacsada, lamaanaha isfuray iyo ardayda wax ka barata jaamacadaha, kuwaasi ayaa ah kuwa u aadka ugu badanyahay fafitaanka cudurku, waxa intaasi dheer xarumaha warshadaha oo xiligan xaadirka ah shaqaale badan ay ka shaqeeyaan ayaa ah kuwa u faafitaanka cudurku ku badanyahay.
Waxa kale oo daraasad lagu sameeyay dadka u ku dhaco cudurku inta badan cida u nugul,waxaana daraasaadkasi lagu soo ogaaday in ay haweenku uga nugulyihiin raga libinlab.heerka faafitaanka ee cudurka hiv aidhska ee dalkeena ayaa la sheegay in u maraayo boqolkiiba 0.82, sida ay hayada cafimadka ee calamk ee who ay warbixinta ku saaban cudurkan ay ku sheegtay hadii hal dal u maraayo heerka faafitanka ee cudrku boqolkiiba 1 in ka badan u noqonoyo daacuun oo kale, balse aanu wali dalkeena heerkasi oo kale gaadhin.
Xafiiska xakamaynta iyo ka hor taga cudurka hiv aidhska ee federaalka oo u waramay wargayska addis maleda ayaa sheegay in sanadkan 2013ka laga helay dad tiradoodu ay gaadhayso 11 kun iyo 715 qof, sida oo kale isla sanadkan dad tiradoodu ay gaadhayso 12 kun iyo 685 ay u geeriyoodeen cudurka hiv aidhska iyo xanuuno kale oo la xidhiidha. xiligan xaadrka ahna ay dad tiradoodu dhantahay 622 kun iyo 326 oo qof ay qabaan cudurka.
In kasta oo lagu talo jiray in la dhimo tirade dadka cudurka qaadaya ayaa waxa hadana la sheegay in la awoodi wayay in la dhimo tirade dadka cudurka qaadaya. Waxa u qorshuhu u ahaa in boqolkiba 75 hoos lo dhimo tirade dadka cudurka qaadaya waxana la awooday in boqolkiiba la dhimo 52 kaliya.
Marki u dilaacay cabuqa covid 19 ayaa waxa la qabtay hawlo badan. Cudurka covid kuna waxa u aad u wax yeelaynaayay dadka cudurada kale qaba. Dadka cudurka hivga qabana waxa ay ka midka yihiin dadka u nugul xanuunada, si dasi darteena si aanu cudurka covidku ugu dhicin dadkaasi ayaa waxa la sameyay ka hortag balaadhan.
Waxyaabaha lagaga hortagaayay ee la sameeyayna waxa ka mid ka ahaa in bukaanka aidhska oo sadixdi biloodba mar dawooyinka u soo doonan jiray cisbitaalada ayaa looga dhigay in lixidi biloodba ay mar soo doontaan, sidaas darteena hoos loo dhigay khatartii ay kala kulmi lahayeen covid 19.
Total views : 6422074